သုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းများ - Carros.com
အာဖဂန်နစ္စတန်အော်လန်ကျွန်းစုအယ်လ်ဘေးနီးယားအယ်လ်ဂျီးရီးယားအမေရိကန်ဆာမိုအာအင်ဒိုရာအင်ဂိုလာအန်ဂွီလားအန္တာတိကဂွါပြီးတော့ဘာဘူဒါအာဂျင်တီးနားအာမေးနီးယားအယူးဘားသြစတြေးလျသြစတြီးယားအဇာဘိုင်ဂျန်ဘဟားမားအဆိုပါဘာရိန်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘာဘေးဒိုးစဘယ်လာရုစ်ဘယ်လ်ဂျီယံဘယ်လ်ဂျီယံဘေလီဇ်ဘီနင်ဘာမြူဒါဘူတန်ဘိုလီးဗီးယားဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားဘော့ဆွာနာဘူးဗက်ကျွန်းဘရာဇီးဗြိတိန်ကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကိုဘရူနိုင်းဘူလ်ဂေးရီးယားBurkina Fasoဘူရွန်ဒီကမ္ဘောဒီးယားကင်မရွန်းကနေဒါကနေဒါကိပ်ဗာဒီကေမန်ကျွန်းစုဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံချဒ်ချီလီတရုတ်နိုင်ငံခရစ္စမတ်ကျွန်းကိုစ် (ကီးလင်) ကျွန်းများကိုလံဘီယာကော်မ္မရိုဇ့်ကွန်ဂိုအဆိုပါ၏ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံကွတ်ကျွန်းစုကော့စတာရီကာCote d'Ivoire (အိုင်ဗရီကို့စ်)ခရိုအေးရှား (Hrvatska)ကျူးဘားဆိုက်ပရပ်စ်ချက်သမ္မတနိုင်ငံဒိန်းမတ်ဂျီဘူတီနိုင်ငံဒိုမီနီဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံအရှေ့တီမောအီကွေဒေါနိုင်ငံအဲဂုတ္တုပြည်၌အယ်လ်ဆာဗေးဒေါအီကွေတာဂီနီနိုင်ငံအီရီထရီးယားအက်စ်တိုးနီးယားအီသီယိုးပီးဖောက်ကလန်ကျွန်းစုဖရိုးကျွန်းစုဖီဂျီကျွန်းဖင်လန်ဖင်လန်ပြင်သစ်ပြင်သစ်ဂီယာနာပြင်သစ်ပိုလီနီးရှားပြင်သစ်တောင်ပိုင်းနယ်မြေဂါဘွန်ဂမ်ဘီယာအဆိုပါဂျော်ဂျီယာဂျာမနီဂါနာဂျီဘရောလ်ဂရိနိုင်ငံဂရင်းလန်းနေးဒါGuadeloupeဂူအမ်ကျွန်းဂွာတီမာလာဂါဇီးနှင့် Alderneyဂီနီဂီနီဘစ်ဂိုင်ယာနာဟေတီကြားသိနှင့်မက်ဒေါ်နယ်ကျွန်းများဟွန်ဒူးရပ်စ်ဟောင်ကောင် SARဟန်ဂေရီအိုက်စလန်အိန္ဒိယအိန္ဒိယအိန္ဒိယအိန္ဒိယအိန္ဒိယအိန္ဒိယအိန္ဒိယအိန္ဒိယအိန္ဒိယအင်ဒိုနီးရှားအီရန်အီရတ်အိုင်ယာလန်ဣသရလေအီတလီဂျမေကာဂျပန်ဂျာစီယော်ဒန်မြစ်ကာဇက်စတန်ကင်ညာကီရီဘာတီကိုရီးယားမြောက်အမေရိကကိုရီးယားတောင်ကူဝိတ်ကာဂျစ္စတန်လာအိုနိုင်ငံလတ်ဗီးယားလေဗနုန်တောလီဆိုသိုလိုင်ဘေးရီးယားလစ်ဗျားလီချင်စတိန်းလစ်သူလူဇင်ဘတ်လူဇင်ဘတ်မကာအို SARမက်ဆီဒိုးနီးယားဒါဂတ်စကာမာလာဝီမလေးရှားမော်လ်ဒိုက်မာလီမော်လ်တာက Man (၏ကျွန်း)မာရှယ်ကျွန်းစုမာတီနစ်Mauritaniaမောရစ်ရှမာယော့တ်မက္ကစီကိုMicronesiaမော်လ်ဒိုဗာမိုနာကိုမွန်ဂိုလီးယားမွန်တီနီဂရိုးမွန်ဆာရတ်မော်ရိုကိုမိုဇမ်ဘစ်မြန်မာနမီးဘီးယားNauru ကျွန်းနီပေါနယ်သာလန်အန်တီနယ်သာလန်အဆိုပါနယူးကယ်လီဒိုးနီးယားနယူးဇီလန်နီကာရာဂွာနိုင်ဂျာနိုင်ဂျီးရီးယားနီယူးမြောက်ပိုင်းမာရီယာနာကျွန်းစုနော်ဝေနော်ဝေအိုမန်ပါကစ္စတန်ပလောင်းပါလက်စတိုင်းနယ်မြေတွေကိုသိမ်းပိုက်ပနားမားပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံပါရာဂွေးပီရူးဖိလစ်ပိုင်Pitcairn-ကျွန်းပိုလန်ပေါ်တူဂီPuerto Ricoကာတာနိုင်ငံပြန်လည်ပူးပေါင်းခြင်းရိုမေးနီးယားရုရှားနိုင်ငံရုရှားနိုင်ငံရဝမ်ဒါစိန့်ဟယ်လီနာစိန့်ကစ်ပြီးတော့နေးဗစ်စိန့်လူစီယာစိန့် Pierre နှင့်မီကွီလွန်စိန့်ဗင်းဆင့်ပြီးတော့ဒီဂရီနီဒိုင်းSaint-ဘာသယ်လဲမီSaint-မာတင် (ပြင်သစ်အစိတ်အပိုင်း)ဆာမိုအာဆန်မာရီနိုစဝ်တုန်နှင့်ပရဆော်ဒီအာရေဗျဆီနီဂေါဆားဘီးယားseychellesဆီးရီးယားလီယွန်းစင်္ကာပူဆလိုဗက်ကီးဆလိုဗေးနီးဆော်လမွန်ကျွန်းစုဆိုမာလီယာတောင်အာဖရိကတောင်အာဖရိကတောင်ပိုင်းဂျော်ဂျီယာတောင်ဆူဒန်စပိန်စပိန်စပိန်စပိန်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံဆူဒန်ဆူရာနမ်Svalbard နှင့်ဇန်နဝါရီ Mayen ကျွန်းများဆွာဇီလန်ဆွီဒင်ဆွစ်ဇာလန်ဆွစ်ဇာလန်ဆွစ်ဇာလန်ဆီးရီးယားဆီးရီးယားထိုင်ဝမ်Tajikistanတန်ဇန်းနီးယားထိုင်းနိုင်ငံသွားရန်Tokelau အဘိဓါန်Tongaထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုတူနီးရှားကြက်ဆင်တာ့ခ်မင်နစ္စတန်တူရကီနှင့်ကိုင်းကော့စ်ကျွန်းများTuvalu အဘိဓါန်ယူဂန်ဒါနိုင်ငံယူကရိန်းအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းယူနိုက်တက်စတိတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပကျွန်းများဥရုဂွေးဥဇဘက်ဗာနူအာဗာတီကန်စီးတီးပြည်နယ် (သန့်ရှင်းသောဘုရားကိုကြည့်ပါ)ဗင်နီဇွဲလားဗီယက်နမ်Virgin Islands (ဗြိတိန်)Virgin Islands (ယူအက်စ်)Wallis ဟာထိုအ Futuna-ကျွန်းများအနောက်တိုင်းဆာဟာရယီမင်ဇမ်ဘီယာဇင်ဘာဘွေ
ဝန်ဆောင်မှုဤဝေါဟာရများကိုအနီးစပ်ဆုံးဘာသာဖြစ်ကြောင်း, ဝန်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးအနှုန်းများဆိုဒ်၏အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းသက်ဆိုင်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းကိုကြည့်ပါ
https://carros.com မှာက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုရယူသုံးခြင်းအားဖြင့်, သင်တို့ရှိသမျှသည်တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်း, ဝန်ဆောင်မှုဤဝေါဟာရများအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့သဘောတူ, သင်သက်ဆိုင်သောဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အတူလိုက်နာမှုများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်ကြောင်းသဘောတူသည်။ သင်တို့သည်ဤဝေါဟာရများကိုမဆိုနှင့်အတူသဘောမတူခဲ့လျှင်, သင်သည်ဤ site ကို အသုံးပြု. သို့မဟုတ်ကြည့်ရှုခြင်းမှပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။ ဒီက web site ကိုတွင်ပါရှိသောအဆိုပါပစ္စည်းများမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများနှင့်သက်ဆိုင်သောမှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်ကာကွယ်ထားကြသည်။
ခွင့်ပြုချက်ယာယီသာ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေး display ကိုယာယီအဘို့အ Carros.com ၏ website တွင် Non-စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုခြင်းပစ္စည်းများ (သတင်းအချက်အလက်များသို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲကို) ၏တဦးတည်းမိတ္တူကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ ဒါကလိုင်စင်များ၏ထောက်ပံ့ကြေးမဟုတ်ဘဲခေါင်းစဉ်တစ်ခုလွှဲပြောင်းဖြစ်ပါသည်, ဤလိုင်စင်အောက်တွင်သင်သည်မပြုစေခြင်းငှါ:
မည်သည့်စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်အဘို့, သို့မဟုတ် (စီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ် Non-commercial ဆန်သော) မဆိုအများပြည်သူ display ကိုများအတွက်ပစ္စည်းများသုံးတတ်၏
decompile သို့မဟုတ် website ကို Carros.com အပေါ်ပါရှိသောမည်သည့် software ကို engineer reverse ကြိုးစား;
အခြားသူတစ်ဦးရန်ပစ္စည်းများလွှဲပြောင်းသို့မဟုတ်အခြားဆာဗာကိုပေါ်ပစ္စည်းများ mirror ။
သင်တို့သည်ဤကန့်သတ်မဆိုချိုးဖောက်နှင့် Carros.com နေဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မရပ်စဲစေခြင်းငှါလျှင်ဒီလိုင်စင်ကိုအလိုအလျှောက်ရပ်ဆိုင်းရလိမ့်မည်။ ဤအပစ္စည်းများကိုသို့မဟုတ်ဤလိုင်စင်ပြီးစီးအပေါ်သို့၏ကြည့်ရှုပြီးစီးအပေါ်သို့, သင်သည်သင်၏အပိုင်ထဲမှာရှိမရှိအီလက်ထရောနစ်သို့မဟုတ်ပုံနှိပ် format နဲ့မဆိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပစ္စည်းများဖျက်ဆီးရမည်။
Carros.com ၏ website တွင်အဆိုပါပစ္စည်းများ "ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်" ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ Carros.com မျှအာမခံ, အမြန်သို့မဟုတ်ဆိုလိုနှင့်ဤဥပဒေန့်အသတ်မရှိဘဲအပါအဝင်အခြားအာမခံ, disclaims နှင့် negates, ကုန်သည်ဆိုလိုအာမခံသို့မဟုတ်အခြေအနေများ, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှု၏ Non-ချိုးဖောက်မှုများအတွက်ကြံ့ခိုင်ရေး အခွင့်အရေးအသိပညာဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားချိုးဖောက်မှု။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Carros.com တိကျမှန်ကန်မှု, ဖွယ်ရှိရလဒ်များကိုသို့မဟုတ်ယင်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများမှသို့မဟုတ်ဤ site ကိုချိတ်ဆက်မဆိုက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်စပ်လျဉ်းအတွက်ပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရကိုရည်မှတ်ကိုမဆိုကိုယ်စားပြုခိုင်လုံသို့မဟုတ်စေဘူး။
မည်သည့်ကိစ္စတွင် Carros.com သို့မဟုတ်ယင်း၏ပေးသွင်း Carros အတွက်ပစ္စည်းများသုံးစွဲဖို့ထဲကသို့မဟုတ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းပေါ်ထွက်လာသော (ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, ဒေတာသို့မဟုတ်အမြတ်အစွန်းများဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, ဒါမှမဟုတ်ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြတ်တောက်ရန်, အပါအဝင်) မည်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိုက်ဖြစ် .com ။ website ကို Carros.com ဒါမှမဟုတ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုယ်စားလှယ် Carros.com နှုတ်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောပျက်စီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေ၏စာဖြင့်ရေးသားအကြောင်းကြားခဲ့လျှင်ပင်။ အချို့သောတရားစီရင်မှုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောအာမခံ, ဒါမှမဟုတ်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်ဖွစျပှားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာဝန်ယူမှု၏ကန့်သတ်မှုအပေါ်ကန့်သတ်ခွင့်ပြုမပေးတဲ့အတွက်အဲဒီကန့်သတ်သည်သင်လျှောက်ထားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
Carros.com ၏ website တွင်ထင်ရှားကျော်ကြားသောအဆိုပါပစ္စည်းများ, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်ပုံ, ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ပုံပြပွဲအမှားအယွင်းများပါဝင်သည်နိုင်ဘူး။ Carros.com က၎င်း၏ဝဘ် site ပေါ်တွင်ပစ္စည်းများကိုမဆို, တိကျမှန်ကန်ပြီးပြည့်စုံသောသို့မဟုတ်လက်ရှိဖြစ်ကြောင်းအာမခံမပေးပါဘူး။ Carros.com အသိပေးစာမပါဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်၎င်း၏ဝဘ် site ပေါ်တွင်ပါရှိသောပစ္စည်းများမှစသောအပြောင်းအလဲဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ပစ္စည်းများ update လုပ်ဖို့အဘယ်သူမျှမကတိကဝတ် Carros.com ။
Carros.com ယင်း၏က်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဆက်စပ်သည့်ဆိုဒ်များအားလုံးပြန်လည်သုံးသပ်မဆိုက်ရဲ့ contents များအတွက်တာဝန်မယူခဲ့ပါသည်။ မည်သည့်လင့်ခ်၏ပါဝင်မှု Carros.com ခြင်းဖြင့်ဆိုက်ထောက်ခံချက်ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ မဆိုနှင့်ဆက်စပ် web site ကိုအသုံးပြုခြင်းသင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Carros.com အသိပေးစာမပါဘဲသည့်အချိန်တွင်မဆိုသင့်ရဲ့ website အတွက်ဝန်ဆောင်မှုဤဝေါဟာရများကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်စေနိုင်သည်။ ဒီ website ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ဝန်ဆောင်မှုဤသတ်မှတ်ချက်များကလက်ရှိဗားရှင်းအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့သဘောတူသည်။
ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုခြင်းဖြင့်အုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့် Connecticut ၏ဥပဒေများနှင့်အညီလုပ်ကိုင်နှငျ့သငျဘယ်သို့ကြောင်းပြည်နယ်သို့မဟုတ်တည်နေရာ၏တရားရုံးများ၏သီးသန့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မှတင်သွင်းနေကြသည်။
ဤဝေါဟာရကိုမတ်လ 27, 2019 ကနေထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လစဉ်သတင်းလွှာမှ Subscribe ။
Twitter သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ သုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းများ ထိတှေ့
© 2021 Carros.com. All rights reserved ။